Burma Strange News (Burmese Version): August 2011
ပရလောက သတင်းဌာန၏ ပြည်ပ သတင်းထောက် တာတေကြီး၏ စုံစမ်း လေ့လာမှုများ အရ ကမ္ဘာကျော် ကဗျာပါရဂူကြီး ၀ီလျံ ရှိတ်စပီးယား မသေဆုံးသေးကြောင်း သိရှိရသည်။
၁၅၉၄ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး၊ ယခုအခါ အသက် ၄၄၇ နှစ် ရှိနေပြီဖြစ်သော ဆရာကြီး ရှိတ်စပီးယား မသေဆုံး သေးကြောင်းကို မကြာသေးမီက ထုတ်ဝေသော မြန်မာ စာအုပ် တစ်အုပ်အတွက် အမှာစာ ရေးပေးခဲ့သည် ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်သည်။
ယင်း၏ ညီမဖြစ်သူမှာ ပေါ့ပ် အဆိုကျော် ဘရစ်တနီ စပီးယား ဖြစ်သည်။ သူမသည် ရှိတ်စပီးယားထက် အသက် ၃၈၇ နှစ် ငယ်သည်။
အဆိုပါ ပြဇာတ်စာပေနှင့် ကဗျာဆရာကြီးသည် ဂုဏ်ပကာသန အောင်မြင်မှုတို့ကို ရွံရှာငြီးငွေ့လာသဖြင့် သေဆုံးပြီဟု သတင်းလွှင့်ပြီး ဇာတိချက်ကြွေ အင်္ဂလန်ပြေကို စွန့်ခွာ၍ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်တွင် လာရောက် နေထိုင်လျက် ရှိသည်။ ထိုသို့ နေထိုင်စဉ် ကာလအတွင်း ရှိတ်စပီးယားသည် ရှေ့မှီနောက်မှီ ၀ါရင့် နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းကြီး ဦးချစ်လှိုင်(ခ) ကိုကိုမောင်ကြီးနှင့် သိကျွမ်းရင်းနှီးကာ ယင်း မကြာသေးမီက ထုတ်ဝေခဲ့သော “ကျွန်တော်သိသော တစ်ရံရောအခါများ” စာအုပ်အတွက် အမှာစာ ချီးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။
မြန်မာ့ ခေတ်ပြိုင်စာပေနှင့် ရာဇ၀င် ပညာရှင် ပေါရာဇာ (ပထမံဝိဇ္ဇာ ဘိလပ်) က ဦးချစ်လှိုင်ကတော့ ရှေ့မှီနောက်မှီ စစ်စစ်ပါဘဲ။ သူ့ဟာ အစည်းအဝေးတွေမှာ ဆိုရင် သေသေချာချာ မဆွေးနွေးဘဲ အရှေ့ကို မှီလိုက်၊ အနောက်ကို မှီလိုက် လုပ်ပြီးတော့ အိပ်ငိုက်နေတယ်လို့ ကျွန်တော် လေ့လာဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူနဲ့ ဘရစ်တနီ စပီးယားရဲ့ အစ်ကိုကြီး ဘယ်လို ဆုံစည်းမိသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော် မလေ့လာရသေးပါဘူး။ ၀ီကီပိဒိယကနေ ခိုးချပြီး ကျွန်တော် စာတမ်းတစ်စောင် အမြန်ဆုံး ပြုစုလိုက်ပါမယ် ဟု ပြောကြားသည်။
Posted by BS News at 1:19 AM0comments
စတူးဒင့် မဟုတ်သော စကူးဆန်းများ အတွက် "ဓမ္မ စကူး" လာပြီ
ဓမ္မ စကူး ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ပါသောကြောင့် တက်ရောက်လိုကြသော စကူး ဆန်း (school= ကျောင်း၊ son= သား) School Son များ စကူးအပ်နှံရန် ပြင်ဆင်နိုင်ကြပြီ ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် ကြေးမုံ သတင်းစာကြီးတွင် ရေးသား ဖော်ပြထားလေသည်။
Posted by BS News at 12:50 AM2comments
Posted by BS News at 12:33 AM0comments
လစ်ဗျား အာဏာရှင် ဗိုလ်မှူးကြီး ဂဒါဖီ ခွေးယောင် ဆောင်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အာဏာရှင် စနစ်ကို ဆန့်ကျင် ပုန်ကန်နေသူများထံတွင် အဖမ်းခံရမည် စိုးရိမ်သဖြင့် ခွေးကဲ့သို့ ပုန်းအောင်နေကြောင်း သတင်းတစ်ပုဒ်က ဖော်ပြသည်။
ထို့ပြင် ၄င်းအား တွေ့မြင်သူများ မမှတ်မိစေရန် မူလအမည် "ဂဒါဖီ" မှ "ကရာဖီ" သို့ အမည်ပြောင်းထား ကြောင်းလည်း အဆိုပါ သတင်းတွင် ရေးသားထားသည်။
အီရတ် အာဏာရှင်ဖြစ်သူ ဆက်ဒမ် ဟူစိန် သည်လည်း ကြွက်ယောင် ဆောင်ပြီး၊ ကြွက်တွင်းထဲတွင် ပုန်းအောင်းဖူးသည့် သာဓက ရှိခဲ့ဖူးသည်။
Posted by BS News at 1:15 AM 1 comments
(Photo: Weekly Eleven)
ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း မန္တလေးမြို့ရှိ ဗထူးကွင်းကို ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ Water polo ကွင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲ ထားကြောင်း သိရသည်။
ထို့ကြောင့် အဆိုပါ ဗထူးကွင်းတွင် ဘောလုံးပွဲစဉ်များကို ကျင်းပမည် မဟုတ်ဘဲ Water polo ပွဲများကိုသာ ကျင်းပ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Posted by BS News at 12:43 AM0comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုင်ငံတော် သမ္မတ အဖြစ် တင်မြှောက်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ထုတ် သစ္စာ သတင်းဂျာနယ်တွင် မျက်နှာဖုံး သတင်း အဖြစ် ရေးသား ဖော်ပြသည်။
အဆိုပါ သတင်းတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံ နေသော တိုက်ပုံအင်္ကျီဝတ်ဆင်ထားသည့် နဖူးပြောင်ပြောင် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး တစ်ဦး၏ ဓာတ်ပုံကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
Posted by BS News at 10:59 PM 1 comments
မင်းတုန်းမင်းကြီးကို FB မှာ Friend အဖြစ် Add နိုင်ပြီ
ဒီဖေ့စ်ဘွတ် စာမျက်နှာကို လူမော်ဟန်က ဖန်တီးထားတာပါ
Courtesy: KHET HTAN
မင်းတုန်းမင်းကြီးနဲ့ Friend ဖြစ်လိုသူများ မိမိတို့ရဲ့ ဆန္ဒအလျောက် ဒီ(link) ကိုသွားရောက်ပြီး Add ကြည့်မယ် ဆိုရင်ဖြင့် . . . . :D
Posted by BS News at 10:12 PM0comments
(Photo: Mr Creator)
လွှတ်တော် အတွင်း သမ္မတကြီး Facebook သုံးရန် ပြင်ဆင်နေသည်။
အသေးစိတ် လေ့လာရန် ...
Courtesy: Zarny Win
Posted by BS News at 10:00 PM4comments
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးဇော်ဇော်က ကန်တော့မည်
ပရလောကသားတစ်ဦး၏ သတင်းပေးပို့ချက်အရ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးဇော်ဇော်သည် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လူပုံအလယ်တွင် ရှိခိုးကန်တော့ရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း ကြားသိရသည်။
ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ ဘိလပ်မြေနှင့် အဖျော်ယမကာထုတ်လုပ်ရေး အစရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း မြောက်မြားစွာကို လုပ်ကိုင်နေသည့် ဦးဇော်ဇော်သည် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့် ပလဲနံပသင့်သူ ဟု နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားသည်။ သို့သော် စစ်အစိုးရ အတိုက်အခံ အချို့ကမူ ဦးဇော်ဇော်သည် မနုဿနွယ်ဖွား လူသားစင်စစ် မဟုတ်ဘဲ လူယောင် ဖန်ဆင်းထားသော ယက္ခဘီလူးကြီးသာ ဖြစ်သည်ဟု ဖွင့်ချထားသည် (Click Here)။ ဦးဇော်ဇော်သည် မြန်မာလူမျိုး မဟုတ်ဘဲ ရိုမေးနီးယားနွယ်ဖွား သွေးသောက်ဘီလူး (သို့) သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင် ဟု အတိအလင်း ရေးသား ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အဆိုပါ သွေးသောက် ဘီလူးကြီးသည် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အား လူပုံအလယ်တွင် နဖူးမြေစိုက် ဦးခိုက်တောင်းပန်ရန် ကြံစည် ပြင်ဆင် နေကြောင်း သံသယဖြစ်ဖွယ် အထောက်အထားများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရလောက သတင်းဌာနက ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသည်။
Soccer Myanmar တွင် ဖော်ပြထားသည့် သတင်းများအရ သွေးသောက်ဘီလူးကြီးသည် သြဂုတ်လ ၂၀ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် စနေနေ့တွင် နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်ရှိ မြန်မာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်ရှင်း ဗဟိုဌာန၌ ပြုလုပ် ကျင်းပခဲ့သည့် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ၀န်ချ တောင်းပန် ကန်တော့လိုကြောင်း အရိပ်အမြွက် ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် အချို့ သတင်းဌာနများကမူ သွေးသောက် ဘီလူးကြီးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို U-19 ဘောလုံးပြိုင်ပွဲသို့ ဖိတ်ကြားခဲ့သည် ဟုသာ လွဲလွဲမှားမှား ဖော်ပြထားသည် (Click Here)။
﻿ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဦးဇော်ဇော်က ၀န်ချတောင်းပန်ရန် ပြင်ဆင်နေစဉ်
ပရလောက သတင်းထောက်ကြီး ဦးနှစ်ဖက်ချွန်၏ အလိုအရ ဘီလူးကြီးက လူထုခေါင်းဆောင်ကို ကန်တော့မည့် ကာလမှာ စက်တင်ဘာလ ၈ရက်နေ့မှ ၂၁ရက်နေ့ အထိ ဖြစ်ပြီး၊ ကန်တော့မည့် နေရာမှာ ရန်ကုန် သုဝဏ္ဏ အားကစားကွင်း ဖြစ်မည် ဟု ခန့်မှန်းသည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရောက် မြန်မာ့ အရေး လေ့လာသူ သုတေသီ ဒေါက်တာသာဂိ က "ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒါဟာ စောင့်ကြည့်ရမယ့် အခြေအနေ တစ်ရပ်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့လို ပြည်ပရောက် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေ အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တိုက်တွန်း အကြံပေးလိုတာကတော့ ဘောလုံးပွဲကို သွားမယ်ဆိုရင် ကျည်ကာ အကျီင်္တင် မကဘူး၊ ရေသန့်ဘူး ကာ၊ ကွမ်းယာထုပ် ကာ၊ ဖိနပ် ကာ၊ အုတ်ခဲ ကာ အကျီင်္ ၀တ်ဆင်ပြီးမှာ သွားရောက် ကြည့်ရှုသင့်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဘာ့ကြောင်လဲ ဆိုတော့ ဒီ ဘောလုံးပွဲ ပရိတ်သတ်ထဲမှာ စစ်အစိုးရက လက်သပ် မွေးထားတဲ့ စွမ်းအားရှင် လူမိုက်တွေ ရှိနေနိုင်လို့ပါပဲ” ဟု ပြောကြားသည်။
E Grass (မစင် မြက်ပင်) အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးကမူ “အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘောလုံးပွဲ သွားကြည့်မယ်ဆိုရင် အာဏာရ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ အတိုက်အခံ ကြားမှာ နားလည်မှု တစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်မယ့် အလားအလာကောင်းတွေ ပေါ်ထွက်နိုင်ဖွယ် ရှိတယ်။ ဒါကို စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ကြီးတွေ၊ Stakeholder တွေက ကြားဝင် ပံ့ပိုးပေးရမယ်။ ဒါမှာ နှစ်ဘက်လုံး ၀င်းဝင်း ဖြစ်နိုင်မယ်” ဟူ၍ ပြောကြားလိုက်သည်။ (မှတ်ချက်။ ။ ၀င်းဝင်း ဆိုသည်မှာ သင်းသင်း၏ ညီမကလေး ဖြစ်ပြီး ရုပ်ရည်ရူပကာနှင့် ပြည့်စုံသူ ဖြစ်သည်။)
ဘောလုံးကွင်းအတွင်း ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီး ပရိတ်သတ်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးခဲ့သည့် ဦးဇော်ဇော်အား ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားစဉ် (Photo: Mizzima)
မကြာသေးမီ ရက်ပိုင်းအတွင်း ကျင်းပခဲ့သော ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲ အတွက် မြန်မာအသင်းနှင့် အိုမန်အသင်းတို့ ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏ ဘောလုံးကွင်း အတွင်း ယှဉ်ပြိုင် ကစားကြစဉ်ကလည်း သွေးသောက် ဘီလူးကြီးသည် သူ၏ အမှားများကို သိမြင်နားလည်ပြီး ဘောလုံးပွဲ လာရောက် ကြည့်ရှုသူ ပရိသတ်များကို တောင်းပန် ကန်တော့ခဲ့ဖူးသည်။ သို့သော် ပရိတ်သတ်များက ခွင့်မလွှတ်ခဲ့ကြပေ။ ထို့ပြင် သွေးသောက် ဘီလူးကြီး ဦးဇော်ဇော် လန်ကွတ်တီ ၀တ်မည် ဟူသည့် သတင်းလည်း မကြာသေးမီက ထွက်ပေါ်ခဲ့ဖူးသည် (Click Here)။ ထိုသတင်းနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တောင်းပန် ကန်တော့မည်နေ့တွင် ဘီလူးကြီး မြန်မာရိုးရာ ၀တ်စုံကို ၀တ်ဆင်မည်လော၊ သို့တည်းမဟုတ် အနောက်တိုင်း ၀တ်စုံကို ၀တ်ဆင်မည်လော၊ သို့တည်းမဟုတ် လန်ကွတ်တီ ၀တ်မည်လော စသည့် သို့လော သို့လော ခန့်မှန်းချက်များ တရစပ် ထွက်ပေါ်နေသည်။
Posted by BS News at 11:19 PM4comments
အစိုးရဆိုတာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို စာရေးဆရာကြီး ဦးအောင်သင်းက ဘယ်လို ဖွင့်ဆိုပါသလဲ????
(မင်းသန့်ကျော် ဗီဒီယို ရိုက်ကူးရေးက မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ မြောက်ဥက္ကလာ စာပေဟောပြောပွဲမှတ်တမ်းမှာ ကြည့်ရှု နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်)
ဆရာအောင်သင်း၊ ချစ်ဦးညို၊ အကြည်တော် တို့၏ ဟောပြောမှု အစ-အဆုံး ရှုစားရန် ....
Posted by BS News at 6:00 PM3comments
ပြည်ပရောက် သင်္ဘောသားများ ၆ လအတွင်း မြန်မာပြည် ပြန်လာကြရန် သမ္မတကြီး ပြောဆို
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက ပင်လယ်ရပ်ခြားတွင် အလုပ်လုပ်သော သင်္ဘောသားများကို ၆ လအတွင်း အမိမြေသို့ ပြန်လာစေလိုကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။ ရေမြေခြားတွင် ၆ လထက်ကျော်လွန် နေထိုင်ပါက အမိနိုင်ငံအပေါ် သံယောဇဉ် လျော့နည်းသွားစရာရှိသည့်အပြင် ဆိုမာလီ ပင်လယ် ဓားပြများ၏ အန္တရာယ်နှင့်လည်း ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နိုင်ရသည်ဟု သမ္မတကြီးက ပြောကြောင်း ၀န်ကြီး အကယ်ဒမီ ကျော်ဆန်းက သတင်းထောက်များကို ပြောသည်။
ထိုအကြောင်းများကို ထောက်ရှု၍ သမ္မတကြီးက ၀င်ငွေခွန်ဆောင်ရသည့် နှုန်းထားကို လျှော့ပေးလိုက်ကာ၊ လျှော့ပေးသည့်ကာလကိုလည်း ၆ လသာ သတ်မှတ်ပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အကယ်ဒမီ ကျော်ဆန်းက ရှင်းပြသည်။
သို့မှသာ နိုင်ငံခြားရောက်နေသော သင်္ဘောသားများ ၆ လအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကမန်းကတန်းပြန် လာပြီး အခွန်ဆောင်စေခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအား အချိန်အကြာကြီး ခွဲမသွားဘဲ ပြည်တော်ပြန်နိုင်ကြမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ၄င်း အပြင် ခင်ပွန်းသည်နှင့် အကြာကြီး ခွဲခွာနေရသော သင်္ဘောသား ဇနီးမယားတို့မှာလည်း ခင်ပွန်းယောက်ျား သင်္ဘောသားများ ၆ လ အတွင်း ပြန်လာကြခြင်းဖြင့် ခင်ပွန်းသည်နှင့် မြန်မြန် ဆုံဆည်း နိုင်ကြမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးသည့် သမ္မတကြီး၏ စေတနာနှင့်သံယောဇဉ် ပမာဏကို သင်္ဘောသား ဇနီးမယားတို့ အနေဖြင့် ခန့်မှန်း ကြည့်ကြစေလိုကြောင်း အကယ်ဒမီ ကျော်ဆန်းက ပြောသည်။
ပင်လယ်ပြင်တွင် မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရပ်ခြား ကုန်းမြေ တွင် အလုပ်လုပ်နေသူများ အနေဖြင့်လည်း ၆ လအတွင်း အခွန်ဆောင်မှသာ လျှော့ပေါ့သော နှုန်းထားကို ရရှိကြမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ၆ လ ကျော်လျှင် ဒုံရင်းအတိုင်း ဆောင်ကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်ရရှိသည့် လစာခေါင်းစဉ်မှ ၀င်ငွေစုစုပေါင်းအပေါ် ရရှိသည့်နိုင်ငံခြားငွေ အမျိုးအစားဖြင့် ပေးဆောင်စေသည့် ၀င်ငွေခွန်ကို ၁၀% အစား ၂%သို့ လျှော့ပေါ့သတ်မှတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာတွင် ၂၀၁၁ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၉ရက်နေ့မှစ၍ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၈ရက်နေ့ထိ (၆)လသာ ပြဌာန်းထားခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းထောက်များ၏ မေးမြန်းချက်ကို ၀န်ကြီး အကယ်ဒမီ ကျော်ဆန်းက အထက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by BS News at 4:00 PM 1 comments
Posted by BS News at 11:00 PM 1 comments
စပါးခင်းများ ဖျက်ဆီးမှု သတင်း
၂၀၀၉ နှင့် ၂၀၁၀ နှစ်များအတွင်း စပါးစိုက်ခင်း စုစုပေါင်း ၁၉,၅၉၂ ဧက ကို နိုင်ငံတော်က ဖျက်ဆီးလိုက်သည်။
အကျိုးဆက်အဖြစ် မြန်မာပြည်တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း ဆန်စပါး အကြီးအကျယ် ရှားပါးတော့မည် ဖြစ်သည်။
ဆန်စပါး ရှားပါးမှု ပြသနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် မြန်မာသမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ကိုယ်တိုင် စပါးစိုက်နေသည် (ဖတ်ရန်)။ သို့သော် သမ္မတကြီး၏ စပါးခင်းမှ ထွက်သော ဆန်စပါး ပမာဏမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာကို မဆိုထားနှင့်၊ မိသားစု စားသောက်ရန်ပင် လုံလောက်မှု မရှိဟု သိရသည်။
သမ္မတကြီး ကြံရာမရတော့သဖြင့် ဆံပင်များကျွတ်ထွက်ကာ ခေါင်းပြောင် သွားသည်ဟု သတင်းတစ်ပုဒ်က ဆိုသည်။
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ကြံရာမရတော့သည့် အဆုံးတွင် နေပြည်တော်၌ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ကျင်းပပြီး၊ ဆန်စပါးပြတ်လပ်မှု ပြသနာ ဖြေရှင်းရန်အတွက် အရပ်ကူပါ လူဝိုင်းပါ အဖြေရှာခိုင်းနေသည်ဟု သိရသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပါ သမ္မတကြီးက အကူအညီ တောင်းခံထားသည်။
ယနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နှင့် သမ္မတကြီးတို့ တွေ့ဆုံကြသည်ဟု သိရပြီး ဆွေးနွေးမှု အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို မသိရပေ။
သမ္မတ၏ စီးပွားရေး အကြံပေးများကမူ ဆန်စပါး ရှားပါးမှုကြောင့် ပြည်သူလူထု ထမင်းမစားရလျှင်လည်း ပြသနာ မရှိကြောင်း၊ ထမင်းမစားရပါက ပေါင်မုန့် စားကြလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ ဖွင့်လှစ်သည့် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် အကြံပြုကြသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
Posted by BS News at 8:41 PM0comments
Credit: Journalist's Hittai
Posted by BS News at 6:48 PM2comments
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ကျော်သူ မုတ်ဆိတ်မွေး ရိတ်မည် မဟုတ်
မုတ်ဆိတ်မွေး၊ ပါးသိုင်းမွေးများကို ရိတ်သိမ်းမည် မဟုတ်ဟု ကျော်သူက ပြောဆိုကြောင်း မဇ္ဈိမ သတင်းဌာနက ယနေ့ ရေးသားဖော်ပြသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က သူသည် ကျော်သူ့ ပရိသတ်ဖြစ်ပြီး၊ ရုပ်ရှင်မင်းသား ကျော်သူမှာ အလွန်ချော၊ အလွန်ခန့်ကာ သူအလွန် သဘောကျခဲ့ရသည့် မင်းသား ဖြစ်သည်ဟု ထုတ်ဖော် ပြောဆိုကြောင်း သိရသည်။
ယမန်နေ့က နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်သည့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ အသင်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့်
“တွေ့ဆုံပွဲ” တွင် အကယ်ဒမီကျော်သူ၏ ဇနီး ရွှေဇီးကွက်နှင့် နှုတ်ဆက်စဉ် သမ္မတကြီးက ယင်းသို့ ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ကျော်သူ့ အနေဖြင့် ပါးသိုင်းမွှေး၊ မုတ်ဆိတ်မွေးများကို ရိတ်ပြီး မင်းသားပုံစံဖြင့် နေစေချင်ကြောင်း ကိုလည်း ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
သို့သော် ကျော်သူက မုတ်ဆိတ်မွေး၊ ပါးသိုင်းမွှေးများကို ရိတ်ကာ လှလှပပ ပြုပြင် နေထိုင်ဘို့ အတွက် စိတ်ဆန္ဒ မရှိတော့ဟု ပြောဆိုလိုက်သည်။
(မဇ္ဈိမ သတင်းဌာန၏ ရေးသားချက်မှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြပါသည်)
သတင်း အသေးစိတ် ဖတ်ရှုရန် ...
Posted by BS News at 11:27 PM0comments
Labels: Joke မဟုတ်ပါ, Satire မဟုတ်ပါ, သတင်းဖြစ်ပါသည်
ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးခွင့် ပိတ်ပင်ခံထားရသော သရုပ်ဆောင် ကျော်သူ ရုပ်ရှင် ပြန်လည် ရိုက်ကူးခွင့် ရရှိတော့မည်ဟု The Voice Weekly ၏ Facebook စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားချက် အရ သိရသည်။
(The Voice မှ)
မြန်မာ အစိုးရက မုတ်ဆိတ်မွေးထားသော အနုပညာရှင်များ၏ အနုပညာ ဖျော်ဖြေခွင့်ကို ပိတ်ပင်ခဲ့ဖူးသည်။
(ယခင် သတင်းတစ်ပုဒ်- ပြန်ဖတ်ရန်)
ယခု ကိုကျော်သူ ရုပ်ရှင် ပြန်လည် ရိုက်ကူးပါက မုတ်ဆိတ်မွေး ဆက်လက် ထားရှိမည် မထားရှိမည် ဆိုသည်ကို အတိအကျ မသိရသေးပေ။
Posted by BS News at 1:32 PM0comments
ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ် ဗိုလ်မှူးကြီးနဲ့ သူ့ချစ်သူတို့ ပြသနာ ဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးကြီးရဲ့ ဂရုစိုက်တာ မခံရတဲ့ အတွက် ချစ်သူက ဗိုလ်မှူးကြီးတို့ရဲ့ စခန်း တစ်ဖက်ကမ်းမှာ ရှိတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့က မြို့တော်ဝန်ကို အကူအညီတောင်းခံတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မဲဆောက်မြို့တော်ဝန်ကလည်း ကရင်စခန်းအထိ လိုက်လာပြီးတော့ ဗိုလ်မှူးကြီး- ချစ်သူနဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း၊ ဗိုလ်မှူးကြီးကိုလည်း ချစ်သူအပေါ် ဂရုတစိုက်ရှိစေဖို့ တိုက်တွန်းပြောဆိုသွားမယ့် အကြောင်း သတင်းတပုဒ်မှာ ဖတ်ရှုရပါတယ်။
Posted by BS News at 1:08 PM 1 comments
ရာထူးမှ ပြုတ်တော့မည် ဖြစ်သဖြင့် ဦးကျော်ဆန်း ငိုကြွေး
ဓာတ်ပုံများကို (ဒီနေရာ)က ယူပါတယ်။
သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲများတွင် ပေါက်တတ်ကရ မမှန်မကန် ပြောဆိုမှုများကြောင့် ဦးကျော်ဆန်းကို ၀န်ကြီးရာထူးမှ အနားပေးရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က သူ၏ သန့်ရှင်းသော အစိုးရတွင် လိမ်ညာသူများကို ဆက်လက် မထားရှိတော့ဘဲ ဖယ်ရှားသွားမည်ဟု
ကြုံးဝါးလိုက်သည်။ လိမ်ညာသူများမှာ အာပုတ်စော် နံကြောင်း၊ အာပုတ်စော် နံသူများကို သန့်ရှင်းသော သူများဟု မခေါ်ဆိုနိုင်ကြောင်း ဦးသိန်းစိန်က ပြောသည်။
ထိုသတင်းကို ကြားရသဖြင့် ဦးကျော်ဆန်း အလွန် ၀မ်းနည်းသွားသည်။ ၀မ်းနည်း သွားသဖြင့် ဆက်လက် မလိမ်ညာနိုင်တော့ဘဲ- ဆို့နင့်သွားကာ လူကြားသူကြားတွင် ဦးကျော်ဆန်း ချုံးပွဲချ ငိုကြွေးကြောင်း သတင်း များက ဆိုသည်။
ဦးကျော်ဆန်းသည် အမြဲတန်း လိမ်ညာတတ်သူ ဖြစ်သော်လည်း တစ်ကြိမ်တစ်ခါတွင်တော့ မလိမ်ညာဘဲ အမှန်အတိုင်း ပြောခဲ့ဖူးကြောင်း ရုပ်သံ မှတ်တမ်း တစ်ခု အရ သိရသည်။
Posted by BS News at 11:08 PM2comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်ပြောင်းသွားကြောင်း သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လက်ရှိနေအိမ်ဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့၊ အမှတ် ၅၄-၅၆ တက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်းနေအိမ် (အိမ်လိပ်စာ-ရှု) ကနေပြီးတော့ အနီးအနားမှာ ရှိတဲ့ အိမ်အမှတ် ၅၁ သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောင်းရွှေ့သွားတယ်လို့ အထက်ပါ သတင်းက ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီ လိပ်စာ အသစ်သို့ ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက်က စပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောင်းရွှေ့သွားတယ် ဆိုတာကိုတော့ သတင်းထဲမှာ ဖော်ပြ မထားပါဘူး။
Posted by BS News at 11:44 PM5comments
ဒါ မီဒီယာ လွတ်လပ် ခွင့်...ဘယ်သူမှ ဘာမှ မပြောနဲ့ တိတ်...
(Myanmar Jokes FB မှ)
ခေါင်းစဉ်- Kyaw Thurein ရဲ့ စာသား
Posted by BS News at 10:53 PM3comments
ဒေါ်လာဈေး အလွန်အမင်း ကျဆင်းမှု၏ နောက်ဆက်တွဲ ရိုက်ခတ်မှု ဂယက်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကော် ပြတ်လပ်သွားပြီးဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်း သိရှိရသည်။
မကြာသေးမီကပင် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သက်ဆိုင်သူများထံသို့ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး သ၀ဏ်လွှာာတစ်စောင် ပေးပို့စဉ်က စာအိတ်ပိတ်ရန်နှင့် တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရန် ကော် မရှိသဖြင့် စာအိတ် ပိတ်ခြင်း မပြုဘဲ စာအိတ်ဖွင့်ကာ ပေးပို့ခဲ့ရသည်။ ဦးဆောင်စီ၊ ဦးစခုန်တိန့်ယိန်း စသူတို့ ပါဝင်သည့် လွှတ်တော်အမတ် ၂၃ ဦးကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားသူများထံသို့ စာရေးသား ပေးပို့ရာတွင် စာအိတ်ပိတ်ရန် ကော် မရှိသဖြင့် စာအိတ် မပိတ်ဘဲ ပေးပို့ခဲ့ရပြန်သည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်း ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးဦးသိန်းထွန်းကမူ - တံဆိပ်ခေါင်း မကပ်ဘဲ စာပေးပို့တယ်ဆိုတာက တိုင်းပြည့် ဘဏ္ဍာ ကျဆင်းစေမယ့် လုပ်ရပ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုလို တံဆိပ်ခေါင်း မကပ်ဘဲနဲ့ စာပေးပို့သူတွေကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီး ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ် ဟု သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးနှင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းကြည့်ရာ ထိုသူက ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် တံဆိပ်ခေါင်း မကပ်ဘဲ စာပေးပို့တာတို့၊ စာအိတ် မပိတ်တာတို့က လူအခွင့်အရေး တစ်ရပ်ပါ။ ပြည်သူပြည်သားတိုင်း ရယူပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ အခြေခံ အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ပါ။ ဒီ အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဆက်လက်ပြီးတော့ တိုက်ပွဲ ၀င်ပါ့မယ် ဟု ပြောကြားသည်။
အထက်ပါ အကြောင်းအရာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အိမ်ရှင်မတစ်ဦးအား မေးမြန်းကြည့်ရာ - ဟုတ်ပါတယ်။ စာအိတ် ကပ်ဖို့ ကော်မရှိတာကြောင့် ဒီလို ဖြစ်ရတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေကတော့ ထမင်းလုံးကို သုံးပြီး စာအိတ် ပိတ်ပါတယ် ဟု ဖြေကြားသည်။
Posted by BS News at 10:30 PM2comments
ပိုစတာ ပြောင်းပြန် ကိုင်မိတာတောင်
ပိုစတာထဲက 8888 ကတော့ တာဝန်ကျေပွန်စွာဖြင့် တည့်မတ်စွာ နေပေးသွားခဲ့ပါသည်။
﻿ဓာတ်ပုံကို ဘီဘီစီ တွင် ကြည့်ရန် ...
ဧရာဝတီ ဘလော့မှ ဓာတ်ပုံများ ရှုစားရန် ...
Posted by BS News at 4:49 PM0comments
စီးပွားရေးပညာရှင် ဒေါက်တာဦးမြင့်- အကျင့်ပျက် ခြစား
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ စီးပွားရေးအကြံပေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် စီးပွားရေးပညာရှင် ဒေါက်တာ ဦးမြင့်ရဲ့ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုအကြောင်းကို သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ တွေ့ရပါတယ်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု NDF ပါတီမှာ ဖွင့်လှစ်နေတဲ့ သင်တန်းတစ်ခုမှာ ဦးမြင့်က "သူ့ရဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု"တွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်သွားတယ်လို့ အဲဒီ သတင်းက ဆိုပါတယ်။
ဒေါက်တာဦးမြင့်က "သူ့ရဲ့ အကျင့်ပျက် ခြစားမှု"တွေကို အခုလို လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော် ၀န်ခံ လိုက်ပေမဲ့ မြန်မာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ အပါအ၀င် အခြား အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ သူတို့ရဲ့ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုတွေကို ၀န်ခံရဲတဲ့ သတ္တိ လုံးဝ မရှိကြတာကို တွေ့မြင်နေရပါတယ်။
Posted by BS News at 11:09 PM0comments
လွန်ခဲ့သော နှစ်သန်းပေါင်း ၄၀ ခန့်က နေထိုင်ကျက်စားခဲ့ဟန်တူသော လူနှင့် မျိုးနွယ်တူသလိုလိုရှိသည့် ခုန်ဆွခုန်ဆွ မျောက်မျိုးနွယ် သတ္တ၀ါတို့၏ မေးရိုးကို မြန်မာနိုင်ငံ ပုံတောင်ပုံညာတွင် တွေရှိရသည် ဆို၏။ အဆိုပါ ခုန်ဆွခုန်ဆွ သတ္တ၀ါကို အစွဲပြု၍ "လူသားအစ မြန်မာက" ဟု န၀တ-နအဖ အကြီးအကဲများက ကြွေးကြော်ခဲ့ကြသည်။
သို့သော် မတ်ရပ်လူမှာ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁.၈ သန်းနှင့် ခေတ်သစ်လူမှာ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း နှစ်သိန်းရောက်မှ ပေါ်ပေါက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်များက ပြောသည်။
ကမ္ဘာမြေကြီးမှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်သန်းပေါင်း ၄၅၀၀ ခန့်တွင် စတင်ဖြစ်ပေါ်ပြီး၊ လွန်ခဲ့သော နှစ်သန်းပေါင်း ၄၀၀၀ ခန့်တွင် သက်ရှိသတ္တ၀ါများ စတင် ဖြစ်ထွန်းဖွယ် ရှိကာ၊ ကမ္ဘာဦးအစ သက်ရှိများမှာ ဘက်တီးရီးယား များသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သူတို့က ရှင်းပြသည်။
သို့သော် ကမ္ဘာကြီးဖြစ်တည်ပြီးနောက်၊ လွန်ခဲ့သော နှစ်သန်းပေါင်း ၃၀၀၀ အရောက်တွင် ဤကမ္ဘာမြေပေါ်၌ မြန်မာလူမျိုးများ ရှိနေပြီး ဧရာဝတီမြစ်ရေကို သောက်သုံးနေကြပြီ ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာအင်တာနက် စာမျက်နှာ အချို့တွင် တွေ့မြင်ရသည်။ သူတို့၏ အဆိုအရ- ဧရာဝတီမြစ်မှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း သန်း ၃၀ တွင် ပေါ်ပေါက်သည်ဟု သိရပြီး၊ မြန်မာလူမျိုးများ အနေဖြင့် ဧရာဝတီမြစ် ဖြစ်ထွန်းမပေါ်ပေါက်မီ နှစ်သန်းပေါင်း ၂၉၇၀ ကတည်းကပင် ဧရာဝတီမြစ်ရေကို သောက်သုံးနေကြပြီ ဟုလည်း သိရသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဘက်တီးရီးယားများသာ ရှင်သန်နိုင်သည့် အချိန်အခါသမယတွင်၊ မပေါ်ထွန်းသေးသော ဧရာဝတီမြစ်ရေကို သောက်သုံးသူများမှာ- မြန်မာများပေလော၊ သို့မဟုတ် ဘက်တီးရီးယားများပေလော ဆိုသည်ကို ဝေခွဲမရနိုင် ဖြစ်နေကြောင်း မြန်မာ့အရေး ကျွမ်းကျင်သူများက သုံးသပ် ပြောဆိုနေကြသည်။
လက်တို့သူ- KZT & M.L.L
Read in PDF ...
Posted by BS News at 2:43 AM2comments
နတ်နဲ့ သွားတွေ့တဲ့ ဗိုလ်လောင်းတွေ နတ်မတွေ့ဘဲ ဘာတွေ့သလဲ
စစ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းဆင်းရန် ရက်အနည်းငယ်ခန့် အလိုတွင် နည်းပြမှူးချုပ် ဒုမှူးကြီး အောင်စောဝင်းနှင့် ဗိုလ်မှူး ၀င်းနိုင်သော် တို့ ဦးဆောင်ပြီး ဗိုလ်လောင်းများ နတ်နှင့် တွေ့ရန် သွားရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းထူး တစ်ပုဒ်ကို ဧရာဝတီဘလော့တွင် ရေးသား တင်ဆက် ထားသည် (Click Here)။
သို့သော် ဗိုလ်လောင်းများ အနေဖြင့် နတ်နှင့် မတွေ့ဘဲ ထူးခြားသည့် အရာနှင့်သာ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ရ ကြောင်း အဆိုပါ ဘလော့တွင် ဖော်ပြထား၏။
နတ်သွားတွေ့သော စစ်တက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်းများ မြင်တွေ့ရသည့် အရာကို သတင်း၏ လက်ယာဘက်တွင် ဓာတ်ပုံနှင့်တကွ အထင်အရှား တင်ပြထားသည်။
သို့သော် နတ်များက ဗိုလ်လောင်းများကို အတွေ့မခံခြင်းလော၊ (သို့မဟုတ်) ပုံထဲတွင် မြင်တွေ့ရသကဲ့သို့ နတ်များက တန်ခိုးဖြင့် ဖန်ဆင်းကာ ဗိုလ်လောင်းများကို ပြသခြင်း ပေလော ဆိုသည်ကို အဆိုပါ သတင်းတွင် သဲသဲကွဲကွဲ ရေးသား ထားခြင်း မရှိပေ။
Posted by BS News at 3:36 AM5comments
အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်သော ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသည် နှစ်လအတွင်း ဒုတိယ အကြိမ်မြောက်အဖြစ် နိုင်ငံအမည်ကို ထပ်မံ ပြောင်းလဲ လိုက်သည်။
နိုင်ငံအမည် ပြောင်းလဲ လိုက်ကြောင်းကို မြန်မာ အင်တာနက် စာမျက်နှာ တစ်ခုတွင် ဖော်ပြထားသည် (ဖတ်ရန်)။ ထိုသို့ ပြောင်းလဲ လိုက်သဖြင့် ယခု အချိန်မှစ၍ ဗီယက်နမ် ဟု ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲခွင့် မရှိတော့ပေ။ အသစ် ပြောင်းလဲ လိုက်သော နိုင်ငံအမည်သစ်မှာ "ဗီယမ်နမ်" ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ နိုင်ငံသည် လွန်ခဲ့သော ဇွန်လ အတွင်းကလည်း နိုင်ငံအမည်ကို Vietnam မှ Vietnum သို့ ပြောင်းလဲ ခဲ့ပြီး (ပြန်ဖတ်ရန်)၊ ယခု အကြိမ်မှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် နိုင်ငံအမည် ပြောင်းလဲ ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by BS News at 2:55 AM0comments
ပဲခူး ရေဘေးအတွက် နိုင်ငံတော်မှ တစ်အိမ်ထောင်လျှင် ၁၅၆ ဒေါ်လာ လှူဒါန်း
ပဲခူး ရေကြီးမှုကြောင့် ဒုက္ခရောက်ကြသော အိမ်ထောင်စုများအား နိုင်ငံတော်မှ တစ်အိမ်ထောင်လျှင် (၁၅၆ ဒေါ်လာ)နှုန်းဖြင့် လှူဒါန်း ဒါနပြုကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သို့ရာတွင် ဒေါ်လာကို အများပြည်သူ တရားဝင် ကိုင်ဆောင်ရန် ခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိသဖြင့် ရေဘေး ဒုက္ခသည်များအတွက် အခက်အခဲ မဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး အလှူငွေများကို မြန်မာ ကျပ်ငွေဖြင့် လဲလှယ် ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာ၏ တရားဝင် လဲလှယ်နှုန်းမှာ ၆ ကျပ် ၄၁ ပြား ဖြစ်သဖြင့် အိမ်ထောင်စု တစ်ခုချင်းစီ အတွက် (၁၅၆ ဒေါ်လာ) နှင့် တန်ဖိုး ညီမျှသော ကျပ်ငွေ "တစ်ထောင်" တိတိ ကို နိုင်ငံတော်မှ စေတနာဖြင့် ပေးအပ် လှူဒါန်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ နောင်တွင်လည်း အများပြည်သူ အခက်အခဲ ဖြစ်ပါက အမေရိကန် ဒေါ်လာနှုန်းထားများဖြင့် ပံ့ပိုး လှူဒါန်း သွားဦးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူအပေါ် ထားရှိသည့် နိုင်ငံတော်၏ ကြီးမားလှသည့် စေတနာကို နားလည်ကြ စေလိုကြောင်း၊ (၁၅၆ ဒေါ်လာ) ပေးအပ် လှူဒါန်းခဲ့သူ နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲတစ်ဦးက ပြောကြားသွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
နိုင်ငံတော်မှ လှူဒါန်းသော ၁၅၆ ဒေါ်လာကို လက်ခံရယူနေသည့် ကလေးငယ် တစ်ဦး
Posted by BS News at 2:45 PM3comments
နိုင်ငံရေးပါတီမှ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ "တင်"ပြ၊ ရှုံ့တွနေသော "တင်" များကို ကော်မရှင်ဥက္ကဌ စိတ်မ၀င်စား
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌအား နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူးတို့က နေပြည်တော်၌ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက် နေ့တွင် နှစ်မိနစ်ကြာ "တင်" ပြ ခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံရေးပါတီများမှ တာဝန်ရှိသူများ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
အဆိုပါ နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက အဖွင့်အမှာစကား အနည်းငယ်ပြောကြားပြီးနောက် တက်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများအား တစ်ပါတီလျှင် နှစ်မိနစ်စီ "ပြောဆို" - "တင်ပြ" ခွင့် ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံရေး ပါတီများမှာ နှစ်မိနစ်သာ အချိန်ရသဖြင့် ရသည့် အချိန်အတွင်း "တင်" ပြ နိုင်ရန် နှင့် နိုင်ငံရေး ကိစ္စများကို "ပြောဆို" နိုင်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြကြောင်း၊ သို့သော် "တင်" ပြ နေစဉ်အတွင်း နှစ်မိနစ် ကုန်ဆုံး သွားသဖြင့် မည်သည့် အကြောင်းအရာကိုမှ မပြောဆို လိုက်ရကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက နိဂုံးချုပ် အမှာစကားကို မကျေမနပ်ဖြင့် ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ် ကြာသည်အထိ ရှည်လျားစွာ ပြောကြားခဲ့ရာတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများမှာ လူလတ်ပိုင်း၊ လူကြီးပိုင်း၊ သက်ကျားအိုပိုင်း သို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်သဖြင့်၊ "တင်" များ အချိုးအစား ကျန ပြေပြစ်ခြင်း မရှိတော့ကြောင်း၊ ၄င်းတို့၏ အိုမင်း ဟောင်းနွမ်း ရှုံ့တွ နေသည့် "တင်" များကို ကြည့်ရှုလိုစိတ် လုံးဝ မရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မိမိ အနေဖြင့် နှစ်မိနစ်တည်းသာ ခွင့်ပြုခဲ့သည်ကို အလိုက်ကန်းဆိုး မသိတတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများက နားလည်မှု လုံးဝ မရှိဘဲ "တင်" ပြကြသည်ကို တွေ့မြင်ရကြောင်း၊ မိမိမှာ မိန်းကလေး ချောချောလှလှလေးများ၏ တင်များကိုသာ အရသာခံပြီး နာရီပေါင်းများစွာ ကြည့်ရှုလိုကြောင်း၊ အဖိုးကြီးများ၏ "တင်"ကို မကြည့်လိုပါကြောင်း၊ အကျယ်တ၀င့် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း တက်ရောက်ခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ တာဝန်ရှိသူများထံမှ သိရသည်။
Posted by BS News at 3:04 PM 1 comments